सेक्स पनि एक औषधी नै हो, जसले गर्छ यी रोगहरुलाई फाइदा ! – rastriyakhabar.com
सेक्स पनि एक औषधी नै हो, जसले गर्छ यी रोगहरुलाई फाइदा !
हाम्रो समाजमा मानिसहरु यौन सम्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट समेत मुक्ति पाइन्छ अर्थात् फाइदा हुन्छ ।
आफ्नो आवश्यकता अनुसार नियमित वा हप्तामा २–३ पटक सेक्स गर्दा विभिन्न रोगहरुका लागि फाइदाजनक हुने बिभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । हामीले यस बिषयमा छोटकरीमा चर्चा गरेका छौं ।
टाउको दुख्नेः नेशनल सर्वे अफ सेक्सुअल एटीट्युड्स एण्ड लाइफस्टाइलले गरेको सोधले माइग्रेन भन्ने टाउको दुख्ने रोगका विरामीलाई नियमित सेक्स फाइदाजनक हुने देखाएको छ । सोधले महिनामा ५ पटक भन्दा कम सेक्स गर्नेहरुलाई माइग्रेन हुने नयाँ तथ्य पनि बाहिर ल्याएको थियो ।
ब्लड प्रेशरः यसैगरी उच्च रक्तचापका विरामीलाई पनि नियमित सेक्स फाइदाजनक रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । नियमित सेक्स गर्दा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुने शोधको दावी छ ।
प्रोस्टेट क्यान्सरः नियमित सेक्स गर्ने पुरुषलाई प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा निक्कै कम हुने दावी शोधकर्ताहरुले गरेका छन् । महिनामा २१ पटक वा नियमित सेक्स गर्दा प्रोस्टेट क्यान्सरको खासै खतरा नहुने उनीहरुको दाबी छ ।
हृदयघातबाट कम खतराः नियमित सेक्स गर्दा शरीरमा एस्ट्रोजन र टेस्टोस्टेरोनका संतुलन बनि राख्ने हुँदा हृदयघातको कम हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
मोटोपनः मोटोपनको समस्यामा परेकाहरुलाई पनि नियमित सेक्स राम्रो मानिएको छ । कुनै पनि कसरत गर्नु भन्दा नियमित सेक्स मोटोपन घटाउन सहजसिद्ध हुने शोधकर्ताहरुको भनाइ छ । –एजेन्सी